Rag Soomaali ku biiri lahaa Daacish oo lagu qabtay Maraykanka – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Rag Soomaali ku biiri lahaa Daacish oo lagu qabtay Maraykanka
Ugu yaraan lix nin oo Soomaalida-Maraykanka ah ayaa lagu qabtay Hawlgallo ay si wadajir ah u qaadeen Baarayaasha Ciiddanka Isku-dhafka ee La-dagaalanka Argagixisadda.
Hawlgalladaasi oo ka kala dhacay Goballadda Minnesota iyo California ayaa lagu beegsaday Dhallinyaradda u safartay iyo kuwa doonayey inay u socdaalaan dalka Syria, si ay ugu biiraan Dagaalamayaasha Daacish ama ISIS.
Afhayeenka Xafiiska Xeer Ilaalinta Maraykanka, Ben Peok ayaa sheegay inay dad ka soo qabteen magaallooyinka Minneapolis iyo San diego.
Afhayeenka ma bixinin faahfaahino dheeraad ah, wuxuuna sheegay in dadka la soo qabtay aysan wax cabsi ah ku ahayn ammaanka dadweynaha.
Telefishinka KMSP News ayaa shaaciyey inay Maamulayaasha horey u aqoonsadeen ugu yaraan 3 ka mid ah Eedeysanayaasha lagu qabtay Magaallooyinka Mataanaha, waxaana raggaasi la qabtay xilli ay Diyaarad ka raaci lahaayeen Garoonka Diyaaradaha JFK Airport.
Xamsa Ahmed oo 19-jir ah ayaa lala qabtay raggaasi bishii November ee sannadkii hore, xilli ay ku sii jeedeen dalka Turkiga, oo ay uga sii gudbi lahaayeen dalka Syria, si ay ugu biiraan Kooxda Daacish.
Dhinaca kale, Hooyo Soomaali oo deggan magaalladda Minneapolis ayaa u sheegtay TelefishinkaKMSP News in mid ka mid ah wiilasheeda lagu xiray Minneapolis, halka kuwa kalena lagu xiray magaallaadda San Diego.
Waxay intaasi ku dartay inaysan garanaynin sababta ay in ka badan 12 ka tirsan Dembi-baarayaasha FBI-da iyo Saraakiisha Boliska u baareen gurigeeda, una qaateen qalab Elektoronik ahaa.
Tan iyo sannadkii 2007-dii, in ka badan 22 dhallinyarro Somali Maraykan degganaa Gobalka Minnesota ayaa u soo safray Somalia, kuna biiray Dagaalamayaasha Alshabaab.
Afar ka mid ah dadka deggan Gobalka Minnesota ayaa horey loogu soo oogay dacwado la xiriiray inay taageerayeen Kooxaha Islaamiyiinta ee ka hawlgala gudaha dalka Syria.
Midowga Europe oo maanta Kulan degdeg ka yeelanayo geeridda ku timid Boqolaal Tahriibayaal oo ay Soomalida ku jireen
Shaqaale Shisheeye ah oo ku geeriyooday qarax ka dhacay Garowe